Guddiga doorashooyinka Somaliland oo shaaciyay xiliga ay qabsoomayaan doorashooyinka iyo hoggaanka axsaabta oo soo dhoweeyay – Kalfadhi
Guddiga doorashooyinka Somaliland oo shaaciyay xiliga ay qabsoomayaan doorashooyinka iyo hoggaanka axsaabta oo soo dhoweeyay
January 17, 2021 Hassan Istiila
Hoggaanka sare ee saddexda xisbi ee Somaliland, ayaa maanta si wada-jir ah usoo dhaweeyey maalinta ay xubnaha komishanka doorashooyinka u cayimeen inay Somaliland ka qabsoomaan doorashooyinka isku sidkan ee goleyaasha wakiillada iyo deegaanka.
Guddiga ayaa shaaciyay in doorashooyinkaasi ay qabsoomayaan 31/05/2021. Saddex xisbi ayaa farriin u diray golaha guurtida oo iyagu iska leh awoodda ugu dambaysa ee cayimaadda doorashada.
Kaddib kulan wada-jir ah oo ay la qaateen madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa, Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), ayey hoggaanka sare ee saddexda xisbi-qaran shaaca ka qaadeen inay si buuxda u taageersan yihiin muddada ay xubnaha komishanka doorashooyinku soo jeediyeen in dalka laga qabto doorashooyinka wakiillada iyo deegaanka.
Ugu horrayn ku simaha xog-hayaha guud ee xisbiga UCID, Mudane Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax, ayaa shaaciyey inay xisbiyada iyaga oo isku duuban isku raacsan yihiin sidii doorashada goleyaasha deegaanka iyo wakiillada loo qaban lahaa maalinta ay komishanka soo jeediyeen oo ah 31-ka bisha shanaad ee sannadkan aynnu ku jirno ee 2021-ka, waxana uu golaha guurtida ugu baaqay inay muhiimad gaar ah siiyaan waqtiga iyo ku midaysan yihiin Axsaata qaranka iyo Komishanka qaranku.
Baarlamaanka Hirshabelle oo kulan ka yeeshay hab-raacyada dhismaha guddiyada ee Baarlamaanka
Madaxweynaha Hirshabeelle iyo Ra’iisul wasaare Rooble oo ka shiray dar-dargalinta hannaanka doorashooyinka iyo sugidda amniga